नवौं राष्ट्रिय खेलकुद ‘पर्ख र हेर’को नीति : RajdhaniDaily.com
Home खेल नवौं राष्ट्रिय खेलकुद ‘पर्ख र हेर’को नीति
काठमाडौं । निर्धारित समयअनुसार नेपाली खेलकुदको कुम्भमेला नवौं राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशमा फागुन अन्तिम साता हुने तय छ । तर, यसपटक कोरोना महामारीका कारण नवौं राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित मिति २१ देखि २८ फागुनमा नहुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । गत चैतदेखि कोरोनाले पारेको असर कहिलेसम्म रहन्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा तीन महिनापछि नवौं राष्ट्रिय खेलकुद नहुने प्रवल सम्भावना छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का सदस्यसचिव रमेश कुमार सिलवालले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद ‘पर्ख र हेर’ नीतिको स्थितिमा रहेको बताएका छन् ।
तर, झन्डै नौ महिनादेखि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण खेलकुद प्रायः ठप्प रहेकाले तोकिएको मितिमा नवौं हुनेमा शंका बढेको छ । ‘रोकियो भने कोभिडका कारण रोकिन्छ । हाम्रा कारण रोकिने कुनै कारण छैन ।’ गत वर्ष आयोजना भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को हिसाब सार्वजनिक गर्ने क्रममा आइतबार सदस्य सचिव सिलवालले भने, ‘स्थिति सहज भयो भने तोकिएको मितिमा हुन्छ । हामी मंसिरको अन्तिम सातामा हुने नहुने जानकारी गराउनेछौं ।’
बृहत खेलकुद प्रतियोगितामा छनोट हुन स्थानिय तहमा खेलाडी छनोटको लागि १५ दिन, जिल्लामा एक महिना र प्रदेशमा १ महिनाको खेलाडी छनोटपछि मात्रै खेलाडी छनोट प्रक्रिया पूरा गर्न तीन महिना लाग्ने परिषद्ले जनाएको छ । तर कोरोना महामारीका कारण खेलाडीको छनोट सुरु हुनै सकेको छैन् । सदस्यसचिव सिलवालले नवौं खेलायो भन्नेमा मात्रै नजाने बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधारका हिसावले गण्डकी प्रदेश नवौं आयोजना गर्न सक्ने स्थितिमा छ । पोखरामा दुई चीज पौडी पोखरी र सुटिङ रेन्जको अभाव हो । अन्य संरचनाको मर्मत गरेपनि पर्याप्त हुनेछ । ‘पौडी पोखरीको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । तर, त्यो बनिसक्दैन । शुटिङ रेन्जको हकमा भने प्राविधकको सल्लाह अनुसार गर्नेछौं । शुटिङ रेन्ज छ । तर त्यसमा नगर्ने कि भन्ने हो । प्राविधिक टोलीले निरीक्षण गरेर ठीक छ भने गर्छौ र नत्र गर्दै छौं ।’ सिलवालले भने । पुर्वाधार र खेलाडी छनोट मात्र नवौंको समस्या हैन, अहिले स्वास्थ्य सुरक्षा पनि चुनौतीको रुपमा थपिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस वाटमोरलाई क्यानको तीन सर्त
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो खेल मेला वि.स. २०३८ सालमा हरेक दुई वर्षमा आयोजना गर्नेगरी सुरुवात भएको थियो । तर पूर्वाधार अभाव र प्रर्याप्त तयारी अभावमा बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको चार दशक नािघिसक्दा अहिलेसम्म आठ संस्करण मात्र भएको छ । पहिलो २०३८ (काठमाडौं), दोस्रो २०४० (पोखरा) र तेस्रो २०४२ (वीरगन्ज) सालमा आयोजना भएको थियो । चौथो संस्करणका लागि भने १३ वर्ष पर्खन परेको थियो । चौथो नेपालगन्जमा २०५५ सालमा भएको थियो । २०५८ मा पाँचौं आयोजनाको तयारी रहँदा तत्कालिन राजपरिवारको घटनाले स्थागित भएको थियो । त्यसपछि २०६५ सालमा पाँचौं संस्करण आयोजना भएको थियो । छैटौं २०६८ मा धनगढीमा र सातौं पूर्वाञ्चलमा २०७३ मा आयोजना भएको थियो । सातौंमा ५ विकास क्षेत्र र ३ विभागिय टोलीको सहभागिता रह्यो । आठौंमा भने ७ प्रदेश, ३ विभाग र एनआरएनए गर १० टोलीको सहभागिता थियो । आठौंमा १ सय ४० स्वर्ण, ८२ रजत र ६७ कांस्य गरी २ सय ८९ पदकका साथ सेना च्याम्पियन बनेको थियो । आठौंपछि गण्डकी प्रदेशले नवौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना अधिकार पाएको थियो ।
अर्थ मधुजंग पाण्डे - January 23, 2021
प्रदेश २ अजयकुमार साह - January 18, 2021
Exclusive नन्दा थापा - January 20, 2021
काठमाडौं । हरेकपटक ल्याएका गीत श्रोताले रुचाएपछि उत्साहित हुँदै आएका लोक पप गायक सुनिल गिरीले यतिबेला आफ्नो नयाँ गीत ‘दिउँला माया तिमीलाई...’ को भिडियो...
Not-to-be-missed एजेन्सी - May 19, 2020
लन्डन । इंग्ल्यान्ड तथा इंग्लिस क्लब चेल्सीका युवा स्टार कलुम हड्सन ओडोई पक्राउ परेका छन् । लकडाउनको नियमको अवज्ञा गर्दै एक मोडल महिलासँगै रहेका...
Editor-Picks प्रशान्त वली - May 28, 2020
Editor-Picks सविन शर्मा - July 10, 2020
मेस्सीले बार्सिलोना छाड्लान् ?
Editor-Picks एजेन्सी - August 29, 2020
क्याटलान । विश्व फुटबल पछिल्लो एक साता एउटै विषयको पछि लागेको छ । त्यो हो, लामो समय बार्सिलोनामा रहेका क्लबका कप्तान लियोनेल मेस्सीले क्लब...
एकैदिन ३११ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या १९ हजार नाघ्यो
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - July 28, 2020
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या १९ हजार ६३ पुगेको...
बिचार श्यामप्रसाद मैनाली - May 18, 2020
कञ्चनपुरमा महिला बेपत्ता, साइकल फेला
दिनेश थापा - January 20, 2021
रोशन श्रेष्ठ - January 19, 2021